Soosaarayaasha iyo Warshad Soosaarayaasha Gusseted ee ugu Fiican | Guoshengli
Hoos Gusseted Pouches Description
Boorsooyinka gusset-ka ee hoose waa inta ugu badan ee la isticmaalo boorsooyinka taagan. Gabdhaha gunta hoose waxaa laga helaa salka hoose ee boorsooyinka rogrogmi kara. Waxay u sii kala qaybsan yihiin hoosta jeexjeexa, K-shaabad, iyo gussets hoose oo wareegsan. K-Seal Gunta iyo Plow Bottom gusset boorsooyinka waxaa laga bedelay boorsooyinka gusset wareega hoose si loo helo awood dheeri ah. Boorsooyinka gusseted ee hoose ayaa istaagaya waxayna u muuqdaan kuwo aad u kala duwan marka loo eego cabbirka iyo qaabka, kuwaas oo si gaar ah loo dhisi karo si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee alaabtaada.
Astaamo dheeri ah oo ku saabsan boorsooyinka gusset hoose
Jeex jeex jeex: fududahay in la jeexo qalab la'aan
Zi Siibtarrada la baadhi karo: shaabadayn wanaagsan oo dib loo isticmaali karo
● Degassing Valve: oo inta badan loo isticmaalo baakadaha kafeega, taasoo u oggolaanaysa kaarboon laba ogsaydhka inay ka baxsato bacda iyadoon oggolaanin oksijiin inay soo noqoto, iyadoo la hubinayo nolol dheeri ah, dhadhan fiican iyo macaan.
Window Daaqad cad: Macaamiisha badankood waxay rabaan inay arkaan waxyaabaha ku jira baakadka inta aysan iibsan. Ku darista daaqad hufan ayaa muujin karta tayada alaabta.
Printing Daabacaad qurux badan: midabbo qeexitaan sare leh iyo sawiro ayaa kaa caawin doona alaabtaada inay ka muuqdaan khaanadaha tafaariiqda. Waxaad dooran kartaa waxyaabo dhalaalaya oo dhalaalaya dusha baakadaha dusha sare si aad u soo jiito dareenka macaamiisha. Sidoo kale, tikniyoolajiyada holograafiga iyo dhaldhalaalka iyo tikniyoolajiyadda saamaynta macdanta ayaa ka dhigi doonta baakadahaaga dabacsan ee kiishka leh muuqaal qaali ah.
Design Naqshadeynta Qaaska ah ee Qaaska ah: waa loo goyn karaa nooc kasta oo ka mid ah, oo ka fiican indho qabashada marka loo eego boorsooyinka caadiga ah
Hole Daldalaad: boorsooyinka leh god la sii jeexay ayaa u oggolaanaya inay si fudud uga laadlaadaan qabatooyinka si loogu soo bandhigo qaab soo jiidasho leh.
Options Fursado dheeraad ah oo la heli karo markii la codsado
Sidee loo cabiraa istaaga boorsooyinka gusset hoose?
● Saamaynta Sumadda: Laga soo bilaabo 1999, waxaan nahay Shiinaha hoggaaminaysa soo saaraha baakadaha rogrogmi kara in ka badan 20 sano;
Size Cabbirka iyo Daabacaadda Gaarka ah: Wareegyo jilicsan oo jilicsan iyo boorsooyin ayaa loo habeyn karaa sida loo baahan yahay cabbirka iyo daabacaadda
Services Adeegyada Hal-ku-joogga ah: Noo sheeg waxaad u baahan tahay, annaguna waxaan kuu fulin doonnaa xalka iyo adeegyada oo dhammaystiran
Time Waqtiga Gaaban ee Gaarka ah: 6 nooc oo mashiinno daabacan ah iyo 49 nooc oo ah mashiinno beddelaya, waanu dhammeyn karnaa oo ku bixin karnaa badeecadahaaga waqtiga.
Ass Hubinta Tayada: Nidaamka xakamaynta tayada tayada leh ee ISO, SGS hubi in dhammaantood ay yihiin illaa codsiyadaada!
Service Adeeg Lagu Kalsoon Yahay: Annagu markasta waan ku garab taagan nahay, jawaabtaada ayaan ka jawaabeynaa oo waxaan xallinnaa dhibaatadaada, iyadoo aan loo eegin iibka ka hor ama ka dib iibka.
Sawirro badan oo Guntin Gunta loo Guntay
Hel Muunado Bilaash ah ------ Isku day Kahor Intaadan Iibsan!
Tijaabooyin bilaash ah oo boorsooyin ah ayaa kuu diyaar ah. Waxay kaa caawinaysaa inaad go'aan ka gaartid xalka baakadka saxda ah ee astaantaada iyo wax soo saarkaaga gaarka ah. Xitaa waxaad dooran kartaa boorsooyinka iyo midabada aad rabto inaad tijaabiso!
Hore: Filim Rollstock
Xiga: Foorsooyinka hoose ee Flat